Argannoon odiitii qabatamaan hojiitti hiikamuu qaba
Itoophiyaa hiyyummaafi boodatti hafummaa keessaa ba’uuf tattaafachaa jirtutti baajanni waggaa waggaadhaan ramadamuufi qabeenyi biroon sirnaan ogganamuufi hojii hojiirra ooluun daran murteessaadha.
Maallaqa biyyattiin sabbata haadha hiyyeessaarraa eegalee bifa gibiraatiin sassaabdee deebiftee bu’uuraalee misoomaa ittiin babal'isuuf ramaddu sirnaan hojiirra oolchuun dirqama ta'us, babal'achuu sassaabdummaa kiraatiin walqabatee qisaasamni maallaqaafi qabeenyaa waajjiraalee mootummaa fooyya'uu gaafata.
Gabaasni odiitii gama kanaan akka biyyaattis ta'e naannoleetti yeroo adda addaa qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyaatanis dhugaadhuma olitti eerre kan jabeessuudha.
Fakkeenyaaf, Manni Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa gabaasasaa raawwii hojiisaa Caffee Oromiyaa baatii Adoolessaa darbe dhiyeesseen qisaamni qabeenya mootummaafi ummataarratti raawwatamu xiyyeeffannaa guddaa akka barbaaduu hubachiiseera.
Odiitarri ittaanaan mana hojichaa, Obbo Amantee Machaaluu tibbana akka jedhanitti, manni hojiisaanii aangoo seeraan kennameef irratti hundaa'uun sirna ittifaayyadama bajtaa, raawwiifi karoora hojii, dhimmoota faayinaansii, hojmaata malaanmaltummaan walqabatanirratti hojjetee argannoosaa qaamaa dhimmi ilaaluuf yoo dhiyeessellee tarkaanfiin sirreessaa fudhatamu laafaadha.
Manni hojichaa odiitii geggeesseen hanqinoota kaffaltii danbiifi qajeelfamarratti osoo hinhundaa’in raawwatamu, maallaqa hangaa ol kaffalamu, kaffaltii raawwatameef ragaan dhiyaatu dhabamuu, bittaan meeshaalee qajeelfamaan ala raawwatamuu, pirojektotaafi sassaabbii gibiraa fa'iin walqabatanirratti argannoo irra gahe qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeesseera.
Waajjiraaleen dhimmi ilaallatuufi qaamni gabaasichi dhyaateef garuu argannoo odiitii manni hojichaa ragaa qabatamaa wajjin qindeessee yoo dhiyeessellee ammayyuu tarkaanfiin sirreessaa fudhatamaa jiru ifatti hinmul'atu.
Kana malees sirna qabiinsaafi ittifayyadama meeshaaleerratti hanqinoonni hedduun jiru. Meeshaaleen bitaman hedduun sadarkaasaanii kan eeggatan miti. Haalli bittaas sassaabdummaa kiraatiif kan saaxilamaadha.
Waajjiraalee hedduu keessa sanadoonni baay’inaafi akaakuu meeshaalee ibsan hinjiran. Meeshaaleen bitamaniifi ergifaman akkasumas mankuusawwan keessa jiran hedduun galmee hinqaban.
Meeshaalee dhaabbataafi dhumeeyyii jiran sirriitti addaan baasanii beekuun rakkisaasha. Kun ammmoo abbaan fedhe qabeenya barbaade akka saamuuf karra kan saaquudha.
Keessumaa, Oromiyaatti konkolaattonni danuun waan ragaa hinqabneef qabeenyichi kan eenyuu akka ta'e hanga addaan baasuun nama rakkisutti rakkoon mudataa jira. Suphaa konkolaataatiin walqabatees hanqinoonni jiru. Suphaan konkolaataa qaama seeraan caalbaasii mo’ateen kan raawwatamu osoo hintaane namni fedhe qarshii fedheen bakka fedhetti suphisiisa. Kunis qisaasama maallaqaatiif sababa guddaa ta’aa jira.
Raawwiifi qulqullina pirojektota guguddoo naannicha keessatti hojjetamaa jiraniin walqabatees komii guddaan hawaasa bira jira. Odiitii taasifameenis ijaarsa pirojektotarratti hanqinoonni jiru.
Galii sassaabuurratti madda galii qorannoon deggaranii karoorsuufi galii duguuganii sassaaburratti rakkoo guddaatu jira. Kaffaltoota gibiraa hordofuufi to’achuun daran laafaadha. Sassaabbii gibiraa wanti walxaxaa taasisu kaffaltoonni gibiraa hedduun galmee qabaachuu dhabuudha.
Waajjiraalee naannicha hunda keessa rakkoon jiraatus kan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan, Biiroo Bishaanii, Albuudaafi Inarjii, Biiroo Eegumsa Fayyaa, Ejensii Bittaa, bulchiinsa qorichaaafi to’annoo meeshaalee wal'aansaa, Abbaa Taayita Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'insa Dinagdee ni eeramu.
walumaa galatti, yaadni odiitii digadee biyyattii baraaruuf sadarkaa gadaanaarra jiraachuu isa kan mul’isu waan ta’eef hooggantoonni manneen hojii mootuummaa xiyyeeffannoo kennuun qabeenyi muraasa qabnu haala dinagdaawaafi si’aawaa ta’een tajaajila ummataatiif oolchuun irraa eegama. Waajjiraaleefi dhimmi ilaallatuufi qaamni gabaasni argannoon odiitii dhiyaateefis tarkaanfii sirreessaa fudhachuu qabu.
Torban kana/This_Week 43572
Guyyaa mara/All_Days 1468352